Jitman's Diary: 2009
Jit Man Basnet to be felicitated with the prestigious ‘Karmaveer Puraskar’
The Nepalese Human Rights Lawyer Mr. Jit Man Basnet is all set to receive an award for his commendable work in the field of social justice after having been nominated for the awards.
Jit Man Basnet will be felicitated the coveted ‘Karmaveer Puraskar’ award on the 26th of November in New Delhi at the exclusive awards function which isapart of “iCONGO’s RIGHT every WRONG conclave”anational
Blind folded eyes and army commander
I had already spent three days and two nights at the Bhairabnath Battalion’s barracks. My life had become more difficult and miserable. My body was extremely vulnerable, but the torture continued. I wasajournalist and lawyer, and I wondered about the extent of torture that the real Maoists received. They knew that
द्वन्द कालमा घटेका कतिपय घटना, आजभोलि सुन्दा जीउनै सिरिङ्ग हुन्छ । युद्द दबाउन राज्य वा सुरक्षानिकायहरुले गरेका हुन् वा बिद्रोहिले युद्दका नाममा गरेका हुन् , त्यस्ता कार्यहरुलाई कुनै पनि रुपमा जायज मान्नसकिदैन । १० बर्ष सम्म चलेको जनयुद्दको क्रममा हजारौ नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्यो । ‍
जनयुद्द सुरु भएकै महिना रुकुमको पिपल गाउँमा प्रहरिले छ जना खत्री बन्धुहरुलाई याताना दिएर निर्ममता पूर्वक मारेको थियो । यो घटना १० बर्से दोन्द्द कालमा भएका कैयन मध्यको एक हो । यस्ता घटनाले दोन्द्द घटाऊने भन्दा पनि बढाउने काम गर्‍यो । कन्हैयासिंह नामका प्रहरीको कमान्डमा घटेको त्यो घटनाले त्यो बेलामा राज्य दमनको अवस्था कस्तो थियो भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । कन्हैयासिंह एक प्रहरीका कनिस्ठ अधिकारी थिए । २०५२ साल फागुन १५ गते रुकुमको पीपल गाउँ विकास समितिको मेलगैरीमा गोठमा सुतिरहेका किसान र विद्यार्थीको निर्ममतापूर्वक हत्या गरेर चर्चामा आएका कन्हैयाले २०५६ सालसम्ममा रकुममा सयौं सोझा
हाम्रो नेपाली समाज पनि कति क्रुर भै सकेछ भन्ने कुरा चैत्र ३० गते घटेको यो घटनाले देखाउछ । हुनत: नेपालमा मान्छे मार्ने काम सामान्य भै सकेको छ । मान्छेहरुमा सम्बेदना हराइ सके पछि यस्ता काम हुने गर्छन् । दश बर्षको दोन्द्धले नेपालीलाई सम्बेदना हिन बनाए छ ।
बालकलाई अपहरण गरेको भन्दै धनुषाको भरतपुरमा एक महिलालाई स्थानीयवासीले जलाए छन् । भरतपुर ५ निवासी राजु विश्वकर्माको अढाई वर्षिय छोरा मनिष विश्वकर्मालाई अपहरण गर्ने प्रयास गरेको भन्दै महिलालाई जलाइएको बताइएको छ । आरोपित महिलालाई गाउँबाट नजिकै रहेको चारनाथ खोलामा गाउँलेले जिउँदै शरिरमा आगोलगाई हत्या गरेका हुन् । राती सवा नौ बजे तिर ती महिलालाई नियन्त्रणमा लिई गाउँले र पीडित परिवारले कुटपिट गरी गम्भीर घाईते बनाएका थिए।
मर्नु अघि महिलाले आफु सिमराको नरबर्ती ८ बस्ने धनमाया भेटवाल रहेको बताएकी थिइन् । उनि नेपाली भेषभुषाको देखिएपनि हिन्दीमा बोलेकी थिइन् । प्रहरी भोली पल्ट विहान १० बजे मात्र प्रहरी घटना स्थलमा पुगेको थियो। घटनास्थल भन्दा तीन किलोमिटर टाढा ईलाका प्रहरी कार्यालय रहेको छ। स्थानीय बासीका अनुसार घटना सम्बन्धमा प्रहरीलाई जानकारी भए पनि प्रहरीले त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिएन ।
घटना अत्यन्त दु:खद हो । ती महिला ले गल्ती वा अपराध गरेकी हुन सक्छ । गाउलेहरुले पक्रिएर प्रहरिमा बुझाउन सक्थे । तर जम्मा भएको भिडले कुटेर मारे । घटना आक्रोसबाट घटेको भए पनि यस्ता कार्यले समाजलाई हिम्सात्मक बनाउदै लैजान्छ । हिजो अफ्रिकामा घटने यस्ता घटना हाम्रै घर आगनमा घट्न थालेछन् ।
मेरो देशलाई त सञ्चै छ ।
देशबासी पो बिमार परे जस्तो छ ।
सुन्धारा अनि ढुङ्गे धारा उस्तै छन् ।
काठमाडौंलाई पो वाटर्-फोबिया भए जस्तो छ ।
भोटेकोशी अनि तामाकोशी बिजुलीले धपक्कै बलेको छ ।
मुलुकलाई पो लाइट-फोबोया भएको छ ।
राज्य अनि राजनीतिक दल पनि उस्तै छन् ।
जनता पो दण्ड हिनताको सिकार भएका छन त ।
"संपर्क हुन सकेन" शब्द सबैको कर्णप्रीय हुन खोज्दै छ ।
आजभोलि मेरो मोबाइल सेट्लाई टावोर-फोबिया लागे जस्तो छ ।
फोबिया नै फोबियाको प्याकेज निवारण गर्न
एउटा अलराउन्डर चिकित्सक चाहिएको जस्तो छ ।
मेरो परिचय नेपाली विद्यार्थी हो ।
नपत्याए मेरो परिचय-पत्र हेर्नुस् ।
साझ बिहान नेताको घर चाहरे पनि दिउसो क्याम्पस गएकै हुन्छु ।
काम चाँही क्याम्पसमा राजनीति गर्ने ।
मैले नपढे पछि, अरुले चाँही पढ्नु पर्छ भन्ने के छ र !
तेसैले म पनि पढ्दिन, अरुलाई पनि पढ्न दिन्न ।
कापी किताब त किनेकै छैन ।
नपढ्ने भए पछि किन चाहियो र त्यो !
झोलामा पर्चा पम्प्लेट बोकेकै छु ।
कहिले काही खुकुरी भाला पनि बोक्छु ।
कति उपयोगी छ त्यो ।
कलम जस्तो हो र लुते ।
क्याम्पसका झ्याल ढोका फुटाएर के भो र , मेरो घरको फुटाएको छैन ।
लाइब्रेरी जलाएर पनि के भो र, आखिर मैले नपढ्ने भए पछि ।
नपढे पनि विद्यार्थी नेता भएकै छु क्यारे ।
म नै हुँ भोलिको मन्त्री अनि प्रधान मन्त्री ।
हिजो क्याम्पस जलाउनेहरु आज मन्त्री भएकै छन ।
झन्डा हालेका गाडीमा हुईकिएकै छन ।
मैले पनि त उनिहरुबाट नै त सिके को हो नि राजनीति ।
मलाई देशको बारेमा के मत्लब !
मेरै भबिस्य मलाई थाहा छैन ।
म भोलिको कर्णधार ।
म नेपाली विद्यार्थी ।
आज फेरी उही समाचार सुने मैले ।
मगन्तेलाई बिदेशीले दान दिए रे !
मगन्तेका नेता बिदेश भ्रमणमा जाने रे ।
आखिर जहाँ गए पनि माग्नै जाने त हुन उनी ।
हामीलाई त्यो समाचार के अनौठो थियो र !
हिजो पनि मगन्तेहरु गएकै हुन ।
ईतिहास देखिनै मागेर गुजरा चल्दै छ ।
गौरब नै त हो त्यों पनि , आफूले गर्न नसके पछि ।
मागेर खान पल्केकाहरुलाई ।
आखिर हामी पनि मगन्तेकै सन्तान त हौ नि ।
कोही पशुपतिमा माग्छन ।
कोही ठमेलमा माग्छन ।
कोही बिदेशमा गएर माग्छन ।
जो जहाँ गएर मागे पनि मगन्ते नै त हो ऊ ।
कसैको माग्ने कला बेग्लै ।
कसैको माग्ने बिधी बेग्लै ।
कोही सुट लगाएर मागिरहेका छन ।
कोही नाङै मागिरहेका छन ।
आखिर जे लगाएर मागे पनि मगन्ते नै त हो ऊ ।
कोही पेटको लागि माग्छन ।
कोही रबाफको लागि माग्छन ।
कोही अरुलाई देखाएर माग्छन ।
कोही आँफैलाई देखाएर माग्छन ।
जो जस्लाई देखाएर मागे पनि मगन्ते नै त हो ऊ ।
मगन्तेहरुको बस्तिमा झगडा छ अचेल ।
कोही सडकमा त, कोही सँसदमा झगडा गर्दै छन ।
कोही माग्न नपाएर झगडा गर्दै छन ।
कोही भाग नमिलेर झगडा गर्दै छन ।
मगन्तेहरु माराकाटा गर्दै छन आफू आफूमा ।
म भने कल्पना गर्छु ।
मगन्ते मालिक बन्ने दिन कहिले आउँला ?
मगन्तेले अरुलाई दिने दिन कहिले आउँला ?
कति अर्काको कबिता मात्रै पढ्नु ? मलाई पनि कबिता लेखौ लेखौ जस्तो लागेर आयो । पत्रकारले कबिता लेखेको के ढंग पुग्थ्यो र ! अली मिलाएर पढ्नु होला । कबिता पढि सकेर, खुब अर्कालाई अर्ती दिने भएछ भन्नु होला नि । सिकारु कबिता हो यो ।
आफू आफूमा लडेर दुनियाँ हसाउने नेपालीहरुलाई ।
आँफै पढ्ने क्याम्पस र लाइब्रेरी जलाउने विद्यार्थीहरुलाई ।
अधिकारको नाममा बाटो थुनेर अरुलाई दु:ख दिनेहरुलाई ।
राजनीतिसँग जोडेर मान्छे मार्नेहरुलाई ।
अराजकतामा रमाउने राजनीतिक दलहरुलाई ।
कवै नचेतने हाम्रा नेताहरुलाई ।
हातमा दलको झन्डा बोकेर पत्रकारिता गर्नेहरुलाई ।
घर अगाडिको सडकमा फोहोर फ्याक्ने शहर बासीलाइ ।
सरकारमै बसेर सडक र संसद बन्द गर्ने, सरकारी पार्टीलाई ।
खाली सरकारको बिरोध मात्रै गर्ने प्रतिपक्षलाई ।
सेना र अदालत छुनै हुन्न भन्ने गणतन्त्र बादीहरुलाई ।
जिम्मेवारी र कर्तब्य भुलेका कर्मचारीहरुलाई ।
सिपाहीलाई अर्दली राख्न्ने जर्साबहरुलाई ।
सबैको बुद्धि फिरोस
It was another gloomy day, and I was not able to recognise day from night. I hadadream in which I was in another world. I was unable to recollect the scene exactly, but I felt strange feelings. My head was full of peculiar and terrifying images. Many fearful shapes moved around in my head. The frightening images haunted
It was6o’clock in the evening. I was sitting inateashop that belonged to my relative in the part of Kathmandu known as Tinkune. I was talking to the shopkeeper about the political instability in the country. A middle-aged man, who seemed like he was 35 or 36 years of age, approached me and orderedacup of milk tea from the shopkeeper. The shopkeeper told him that milk tea was not
Yet, just over the wall inside Mohan Shumshere's former palace at Laxmi Nibas, which